Gịnị bụ ụkpụrụ ọrụ nke na-enye redio redio dijitalụ? - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nye Nye Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » News » Gịnị bụ ụkpụrụ ọrụ nke na-enye redio redio dijitalụ?
Gịnị bụ ụkpụrụ ọrụ nke na-enye redio redio dijitalụ?
Ntugharị Digital Digital nwere ọdịiche dị mkpa site na Analog FM Transmitter.
Na nkenke, Analog FM Transmitter na-eji teknụzụ analog VCO + PLL, mana Digital FM Transmitter na-eji teknụzụ dijitalụ redio dijitalụ DSP + DDS, eserese ahụ dị n'okpuru:
Ihe ngosi dijitalụ dijitalụ gụnyere akụkụ module 6: Ntinye Ntinye Audio Dijitalụ Processrịba Ama Usoro Digital; Digital FM Modulator na Band Pass Filter module; Igwe npịpụta ike na igwe nrụpụta dị ala; Ngwunye igwe - Mịnịsta na nkwukọrịta yana sistem Power & Circuit.
Ntinye ederede Ntinye Audio: Ọ na-enweta akara ntinye ụda na akara ntinye dijitalụ (AES / EBU). Ihe ntụgharị ụda analog ka ọ bụrụ ngbanwe dijitalụ site na (A / D), pịnye DSP. DSP ọdịyo DSP ozugbo. Ndị DSP ga-ahọrọ akara ngosi nwere ike ịbụ akara ụda olu ntinye aka.
Dijitalụ Usoro Mgbama Digital: Nke a bụ akụkụ bụ isi na Exciter / Transmitter, isi ahụ bụ arụmọrụ nrịba ama dijitalụ 550MHz dị elu (DSP), enwere ike ịchịkwa DSP a site na ngwanrọ ma hazie akara ngosi dijitalụ maka inweta mmezi; nzachapụ dijitalụ; dijitalụ na-ekwusi ike; pilot dijitalụ na-eme; Inweta akara stereo dijitalụ, wee mepụta stereo nke mejupụtara akara ngosi, mgbe usoro mgbakọ na mwepu ga-aga, a ga-emegharị mmegharị ahụ ka ọpụpụ FM exciter baseband, ọ ga-abụ mgbapụta mgbapụta FM nke dijital, a ga-eziga mgbaàmà mgbapụta a na 1000MHz Direct Digital Synthesizer (DDS) , tụgharịa gbanwee na Ihe ngosi FM RF.
Digital FM Modulator na Band Pass Filter module: isi nke ngalaba a bụ Direct Digital Synthesizer (DDS), ọ na-enweta akara ngosi obubu mmiri FM site na DSP, wee mekọta ihe mgbaàmà FM RF dijitalụ site na njikọta ya ugboro ugboro. / ntụgharị analog nwere ike ịmepụta mgbaaka modul analog FM, emesịa nweta mgbaama FM RF dị ọcha site na Nzacha-pass.
Igwe ọkụ eletriki na igwe nyocha ihe dị ala: Mpempe a mechiri loop Automatic Gain Control (AGC) FM RF ampilifaya na sekit elele dị ala. Ọ nwere ike ịgba mbọ hụ na ọnọdụ mmepụta ahụ kwụsiri ike n'ogologo oge ọrụ.
Modul Man-machine Interface & Communication module: Ngalaba a na-eji otu arụmọrụ Sistem-on-a-Chip (SOC) arụ ọrụ Exciter / Transmitter Man-machine Interface; Nchịkọta data data arụmọrụ; Nchedo mkpu; Nkwukọrịta na ọrụ ndị ọzọ. Usoro ọrụ niile bụ ntinye site na bọtịnụ; Ihuenyo LCD na ngosipụta ọkụ Ọnọdụ Ọnọdụ. Ọ nwere ike iji RS232 / RS485 / CAN / TCPIP interface nkwukọrịta jikọọ na PC dịpụrụ adịpụ maka nnyefe data yana ọrụ njikwa dịpụrụ adịpụ.
Modul Power & Circuit module: ọ na-enye DC ike voltaji ike maka nkeji ọrụ ọ bụla na Transmitter.
«Nke gara aga: Kedu uru nke ntụgharị Digital FM?
Sistemụ Mmemme FM nke akụ na ụba :Osote "